Global Voices teny Malagasy » Lalao An-dahatsary Manome Topimaso Kely Somary Hafa Momba Ny Revolitiona 1979 Iraniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Avrily 2017 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Hamid Yazdan Panah Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanoherana, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Sarimihetsika, Tantara, Teknolojia, Ny Tetezana - The Bridge
Pkantsary avy amin'ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty.
Ho an'ireo mpanatontosa sarimihetsika, mpanoratra sy mpanao gazety, mijanona hatrany ho lohahevitra manintona ny firenena Iraniana. Saingy ny voamaso ijerena ilay firenena ka tsy ahitàna fitanilàna raiki-tampisaka, fitsaràna an-tendrony, na fametrahana azy ho hafahafa dia fanamby iray mpiseho matetika. Matetika ireo ezaka manana ny hasiny nataon'ireo tandrefana mba “hanalàna sarona” an'i Iràna sy hanehoana ny lafy “maha-olona” ao aminy no nandray ireo fomba fijery tatsinanana mahazatra manaratsy ilay firenena sy ny tantarany. Ary marobe amin'ireo asa vitan'ny Iraniana ho an'ireo Amerikana Tavaratra sy Eoropeana no nitondra nankany amin'ny fampihenana ny fifamahofahoan'ilay firenena  ho lasa heviteny tsotra fotsiny ho fanamoràna ny fanjifan'ireo tandrefana.
Tantara an-dahatsary iray nataonà Iraniana, anefa, no mahavita zavatra tsy fahita firy hanomezana fitantaràna azon'ny rehetra raisina sy tena marina momba ny tantaran'i Iràna tsy nasiana marimaritra iraisana, na ny votoaty, na ny asa famoronana tao anatiny. Ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty  dia manome sehatra fialamboly iray ho an'ireo tia milalao miaraka aminà tsiron-tantara mba hitrandrahana ny iray amin'ireo revolisiona malaza indrindra tamin'iny taonjato lasa iny, ary mamelombelona hatrany ireo hetsika efa tany amin'ny 36 taona lasa izay nisy fiantraikany nahery vaika tokoa tamin'i Iràna.
Lalao novokarin'i Navid Khonsari, Iraniana iray miaina any Etazonia, ary mampiasa ny fomba hoe “fidio ny kisendrasendranao manokana”, ahafahan'ireo mpilalao maka fanapahankevitra misy dikany mifamatotra amin'ireo olana sosialy sy politikan'ilay andro no sady mijery azy toy ny tantara iray mifamahofaho miaraka amin'ny fitaintainana, drama ary fihetsika manaitaitra. Fomba fahatsapàna Iraniana marobe no asongadiny, izay mamohafoha heviteny matanjaka momba ny fankatoavana ho an'ireo Iraniana mpijery, raha sady mitazona ireo tsy Iraniana ihany koa tsy hiala. Tiako manokana ny feon'ny mpiantsehatra, izay, na natao amin'ny teny Anglisy aza voalohany indrindra, dia voaravaka fehezanteny sy fomba fiteny Iraniana.
Tantaranà revolisina roa
Ny hetsika ao anatin'ilay lalao dia manomboka aorian'ilay revolisiona, fakàna am-bavany an'ilay voalohany tompondraharaha ao amin'ny tilikambon'ilay fonja malaza ao Evin, nataon'ilay bibiben'ny taorian'ny revolisiona Iraniana — Assadollah Ladjevardi , mpiambina an'i Evin no sady lehiben'ny fampanoavana ao Tehran. Lavitra azy ny handray ny fomba fanao manatsotsotra zavatra amin'ny filazana ho lafatra ny fotoana talohan'ny revolisiona tao Iràna, ezahan'ilay lalao ny handalina ny toedraharaha politika izay nitondra tamin'ny fidarabohan'ny Shah, ary eo dia manome fomba fijery voalanjalanja momba ireo hery miasa ao anatin'ny firenena.
Ny fifaningoran'ilay tompondraharaha amin'i Ladjevardi no teboka ifantohan'ny lalao, mampifanatrika ireo lafy roa mifanohitra izay niady tamin'ny Shah nandritr'ireo hetsika tamin'ny 1979. Tetikady politika tsy misy indrafo mitovy toy ny nataon'ny Shah ihany no nampiasain'ireo nandray ny fahefana taorian'ny revolisiona, raha ireo izay nanohitra ny Shah kosa mbola nanohy ny tolony mikatsaka fahalalahana. Amin'ny fitrandrahany io hetsika io, ampahatsiahivin'ilay lalao ho antsika fa ny revolisiona rehetra dia samy manana hery anaty daholo ho entina mamokatra, tsy ny haizina ihany, fa hatramin'ny toetra lozabe, saingy hetsika maherifo fanaovana sorona ny aina, firehetampo ary fahasahiana.
Ireo Safidy sy ny Vokany
Mifantoka amin'izay safidy nataonao ho tsy maintsy vokatra atrehan'ilay mpilalao nofidianao ny lalao, vokatra ateraky ny maha-mpikatroka na maha-mpakasary azy. Tafiditra amin'ireny ireo fisalasalàna filozofika toy ny hoe na hanohana ny tsy fampiasàna herisetra miohatra amin'ny tolona mitampiadiana, na hanao tokim-panompoana amin'ny fianakavian'ireo mpiaradia politika. Misy vokany amin'ny fizotry ny lalao ny safidy ataon'ny mpilalao, ary fitaratry ny fanapahankevitra henjana tsy maintsy atrehan'ireo mpikatroka mandritry ny revolisiona rehetra.
Ny hany banga amin'ilay lalao dia ny somary fahafohezany, sy ny zavamisy hoe indraindray ilay tantara lasa toy ny sarimihetsika fa tsy toy ny lalao mifototra amin'ny hetsiky ny mpilalao azy. Ankoatra ireo olana ireo, ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty dia marani-tsaina sy mampifantoka ary mankahery.
Ao anatin'ny tontolo tena izy, teboka iray mbola mampizarazara ny ao Iràna sy ireo zanany am-pielezana ireo tranga tamin'ny 1979. Misy ireo izay manamarina ny jadona nataon'ny Shah, hatramin'ireo izay mamadika azy ho tantara lafatra, tsy mijery akory iray fahasarotan'ny zavatra hiseho aty aoriana. Tsy fahita firy ny fitantaràna tsy voalokon'ny resaka fotokevitra.
Ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty dia mizotra am-panajàna aminà tsipika iray amin'ilay vanimpotoana. Nomena ny hajany sy napetraka tsara ao anatin'ny vanimpotoanany daholo ireo vondrona revolisionera sy fikambanana maro nandray anjara tamin'ilay revolisiona. Manome fanehoana araka ny tena izy ny fahasamihafan'ireo vondrona tafiditra tamin'ireo hetsika ilay lalao, isan'ireny ireo avy amin'ny elatra havia sy ireo vehivavy, vondrona roa izay lasa tsy manana ny tanjany ara-politika ao anatin'i Iràna amin'izao vaninandro maoderina izao.
Farany, tena miavaka ny fahavàran'ilay lalao manolotra ny antsipirihany. Ahitàna ampolony maro amin'ireo teboka ara-tantara, miainga avy amin'ireo saripika sy ireo rakipeo ka hatramin'ny fanehoana an-tsary ireo tranga sy hetsika manandanja. Asongadin'ireo arabe ny soratra an-drindrina avy amin'ilay vanimpotoana, ary ireo hira sy ireo tenifaneva dia ireny izay nanakoako tao Iràna nandritry ny 30 taona lasa ireny. Manome varavarankely iray tonga lafatra ‘ity tantara azo tetezina ity hankanesana any amin'ilay vanimpotoana amin'ny alàlan'ny fanipazana ny mpilalao ho eo afovoan'ilay revolisiona’.
Ny kiana henjana indrindra natao tamin’Ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty dia avy amin'ny governemanta amin'izao fotoana ao Iràna sy ireo famadihany ilay idealy namoizan'ny maro ny ainy. Mifanaraka tsara amin'ny fanahin'ny lalao io, amin'ny fitazonana ireo eo amin'ny fitondrana ho tomponandraikitra, sy amin'ny fanomezana voninahitra ireo idealy izay niteraka ny fanovàna sy ny fanantenana.
Tapitra Ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty, tamin'ny fomba mety indrindra, narahan'ny fanolorana fahatsiarovana ho an'ireo “rehetra ray aman-dreny sy taranaky ny revolisiona”— fampahatsiahivana iray hoe ny lova navelan'izy ireo no ilay iray izay tena sahaza sy mitombina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/26/98486/
 no nitondra nankany amin'ny fampihenana ny fifamahofahoan'ilay firenena: http://azarnafisi.com/book/reading-lolita-in-tehran/
 Ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty: https://globalvoices.org/2016/04/09/they-call-me-haj-agha-gaming-irans-revolution/